Afrika, 08 November 2019
Khamiis 8 November 2019
Qaxooti Dhalashada Kenya Dib u Helaya
Ku dhowaad 50 kun oo qof oo xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya ku nool ayaa la sheegayaa iney yihiin dad u dhashay dalkaasi laakinse haysta kaararka aqoonsiga qaxootinimo ee xeryahaasi.
Shirka Shidaalka Afrika oo lagu qabtay Koonfur Afrika
Magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxaa lagu soo gabagabeeyay Shirkii Todobaadka Shidaalka Africa oo sanadkan wadamo dhowr ah oo Afrikaan ah oo ay Soomaaliya ku jirto ay uga faa’ideysteen inay ku soo bandhigaan macluumaadka shidaalkooda.
Dagaal-ooge Ntaganda oo 30 sano lagu xakumay
Maxkamadda Caalamiga ah ee Danbiyada, ayaa 30 sano oo xarig ah maanta ka xakuntay, hogaamiyihii hore ee jabhadda mucaaridka Congo, Bosco Ntaganda, kaddib marki lagu helay danbiyo ka dhan ah aadanaha.
Taliyaha Ciidamada Mareykanka ee Afrika oo Booqday Itoobiya
Taliyaha Ciidama Mareykanka ee Afrika Jeneral Stephen Townsend oo booqasho ku tagay Dalka Itoobiya ayaa la kulmay raiisul wasaaraha dalkaasi Dr. Abiy Ahmed iyo Jeneraal Berhanu Jula oo ah kuxigeenka taliyaha Ciidamada Difaaca Qaranka Itoobiya.
Taliyaha Africom Stephen Townsend oo Muqdisho booqday
Taliyaha ciidamada Maraykanka ee Taliska Afrika Jeneraal Stephen Townsend ayaa maanta booqasho ku tagay Soomaaliya.
Dowlad deegaanka Soomaalida & Somaliland oo amniga ka shirey
Wafdi ka kooban wasiiro iyo sarakiisha dhinaca amniga oo ka socda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay inay madaxda Somaliland ka wada hadleen arimaha xoojinta ganacsiga iyo la dagaalanka argagixisadda.
Kenya: 700 Qof oo Sanadkii u Dhinta Qaniinyada Maska
Ugu yaraan 700 oo qof ayaa dalka Kenya sannad walba u geeriyoota qaniinyada maska. Khubarada dalka Kenya ayaa wada cilmi baaris ku saabsan sidii arrintan daawo qiimaheedu jaban yahay loogu heli lahaa.
Itoobiya: 78 qof oo ku geeriyooday rabshado
Dowladda Itoobiya ayaa xaqiijisay in 78 qof lagu dilay isku dhacyo isir ku saleysan oo ka dhacay Gobolka Oromada, Gobolka Harari iyo magaalada Diridhabe.
Nigeria: Dad laga soo bad baadiyay kaniisad ay ku xirnaayeen
Booliska dalka Nigeria ayaa sheegay iney soo badbaadiyeen 15 qof uu ku xirnaa kaniisad ku taalla magaalada Lagos. Howlgalkan ayaa qeyb ka ah olole qaran oo lagula dagaalamayo tacaddiga lagu eedeeyay xarumaha diimaha qaar dalkaasi.
Djibouti oo ka digtay duufaan kusoo wajahan Geeska Afrika
Dowladda Djibouti aya maanta ka digtey waxyeelada ka soo gaari karta duufaan la sheegay inuu ku soo wajahanyahay xeebbaha Geeska Afrika.
Al-Shabaab oo weeraray saldhig ku yaalla Wajeer
Muhaajiriin lagu bad-baadinayey xeebaha Libya oo la rasaaseeyey
Hay’adda aan dowliga ahayn ee Jarmalka ee Sea-Eye ayaa baahisay muuqaal ay sheegtay inuu muujinayo rag saaran doon laga leeyahay Libya oo rasaas kusoo furay, xilli ay isku dayayeen inay bad-baadiyaan muhaajiriin halis ku wajayey badda Meditareeniyaanka.